पा,पिनी आमा ! जसले आफुले जन्माएको डेढ महिने शिशुलाई घाँ,टी थि,चेर मा,रिन (हेर्नुस् भिडियो) – Onlines Time
पा,पिनी आमा ! जसले आफुले जन्माएको डेढ महिने शिशुलाई घाँ,टी थि,चेर मा,रिन (हेर्नुस् भिडियो)
April 8, 2021 onlinestimeLeaveaComment on पा,पिनी आमा ! जसले आफुले जन्माएको डेढ महिने शिशुलाई घाँ,टी थि,चेर मा,रिन (हेर्नुस् भिडियो)
आमाको काख स्वर्ग समान हुन्छ। धेरै दम्पत्ति सन्तान भने पछी हुरुक हुने गर्दछन। कुनै आमा होला र आफ्नो सन्तान लाई हे;ला र माया नगर्ने । आमा भन्ने शब्द नै प्रिय लाग्ने गर्दछ । प्रेम, माया , सद्भाव र करुणाको खानी हुन आमा। आफ्नो ९ महीना सम्म कोखमा राखेर जन्म दिएकाे सन्तान लाई माया नहोला र?
तर कास्कीमा भने १ भयंकर, अचम्म र कहा,लीलाग्दो घ,टना घटन पुगेको छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने। आफ्नो आमाले ४२ दिनकाे शिशुलाई घाँटी थिचेर ह, त्या गरेको छिन । पोखरामा १ दम्पती बस्ने र जसबाट मात्र १ सन्तान , जो ४२ दिन मात्र भएको थियाे। श्रीमान ज्याला मजदुर गरेर गुजारा गर्ने गर्दथे। तर ति श्रीमान लाई नै नसोचेको घटना अाई लागेको छ । जब म बिहानको खाना खाएर, काममा जाने बेला सम्म सबै ठिक र राम्रो थियाे तर म गए पछी भने सबै घ ट ना भएछ।
उक्त दिन भने श्रीमानके आफ्नो श्रीमती लाई बच्चा सानो छ आफ्नो र रुम पनि सफा गर्नु नत्र कोरोना के के रोगहरु लाग्ने मात्र भनेको उनके बताए । अरु धेरै हामी बीच कुनै कुरा भएन । तर के कारणले आफ्नो सन्तानको लागि आफ्नो आमा नै शै;तान बनेर अाईन, सम्झदा पनि म न दु ख्ने गर्दछ । यस्तो आमा हुनु बुन्दा त ठु हुराे हुनु धेरै जाति उनले थपे। अब बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोला:
धमाधम सुरु हुँदै सडक विस्तारको काम, कोटेश्वर–जडीबुटी सडकखण्ड ६ लेन विस्तारमा ५० प्रतिशत सम्पन्न (सेयर गराै)
च’र्को बिवा’दपछि कल्पना र प्रदिप पहिलोपटक मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
March 20, 2021 onlinestime
भ*र्खरै हेर्नु ज्ञानेन्द्र शाहीले गरे अ’हिले सम्मकै ठु’लो खु* ला’सा Gyanendra Shahi
December 18, 2020 December 18, 2020 onlinestime